Ciidamada Huwanta oo la wareegay deegaano u dhexeeya Baladweyne iyo Buula burde – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Axad, Sep, 30, 2018(HNN) Ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee (AMISOM) ee ka socda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya ayaa la wareegay gacan ku heynta deeganno ku teedsan wadada laamiga ee isku xirta Baladweyne iyo Buula-burde.
Deegannada ciidamada la wareegeen ayaa waxaa ka mid ah Tarshanta, Beer-xaano iyo Nuur Fanax oo ku yaalla wadada laamiga ah.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa Halbeeg u sheegay in howlgalka looga gol leeyahay in lagu furo wadada isku xirta Baladweyne iyo Buula burde oo muddo ku dhow afar sano uu go’doomiyeen uru rka Al-shabaab.
Deegaannada ciidamada huwanta ay la wareegeen ayaa waxaa markii hore ku sugnaa oo gacanta ku hayay ururka Al shabaab.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa lagu soo waramaya in ka hor inta aysan la wareegin deegannadan ay iska horimaad kooban kala kulmeen dagaalyahannada Al shabaab oo deegannadan ku sugnaa.
Maamuladii soo maray gobolka Hiiraan ayaa dhowr mar bilaabay howlgallo lagu furayo wadada isku xirta Baladweyne iyo Buula burde, iyadoo muddo kadib ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay dib uga soo noqdeen.
Howgalladaan wado furista ah ayaa imaanaya xili maalmo kadib markii guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Daba geed) oo dhawaan xilka la wareegay uu ku dhawaaqay inuu xooga saari doono sugidda amniga iyo kor u qaadista caddaladda.
Guddomiyaha ayaa digniin adag u diray dadka shacabka ah ee u xukun doonta maxkamadaha Al-shabab ee ku yaalla qeybo ka mid ah deegaannada ay ururka ka taliyaan ee ku yaalla gobolka.
Ciidamada Huwanta oo la wareegay deegaano u dhexeeya Baladweyne iyo Buula burde added by admin on 30/09/2018